Ny fomba fanamboarana famafa trano​ - Le blog Inovatic
Ireto sary manaka ireto dia maneho ny fomba entina anamboarana azy ireo, ety amin’ny faritra Atsinanana no misy azy ireo ary tsy dia lavitra ny renivohitry Betsimisaraka no misy ny toerana fanamboarana azy ireo, Tsarakofafa Toamsina, Madagascar.
Vita tanteraka amin’ny sy tanana.
Mahavita 50 isa isan’andro eo ry zareo ary amidy amin’ny vidiny 500 Ar ny iray. Eto izahay dia manentana isika Malagasy rehetra ary tsy ankanavaka mba hanjifa ny vita avy eto an-toerana, fa maninona hoy anao no tokony hanao izany isika rehetra ? Dia tsotra ny valiny, mamelona fianakaviana maro ireny asan-tanana ireny.
Fitaovana fanitsina ireo ravin’ny famafa
Fampiasana ilay fitaovana
Atapy amin’ny hain’andro sy maloka ilay lohan’ny famafa
Famafa vita Malagasy
Parc Zoologique Ivoloina – Toamasina, Madagascar article Blog inovatic Publié le3:21 - Août 18, 2020
[…] plus, une diversité de la faune indigène de l’est de Madagascar (Toamasina) attend ceux qui explorent les cinq sentiers de la nature à travers les […]
Ny fomba fanamboarana famafa trano​ 29 mars 2020